Guddigii loo saaray khilaafka Muqdisho & Nairobi oo warbixinadooda soo gabagabeeyay! | XAL DOON
Home NEWS Guddigii loo saaray khilaafka Muqdisho & Nairobi oo warbixinadooda soo gabagabeeyay!
Bishii December ee sanadkii tagey shirkii urur goboleedka IGAD ee Jabuuti waxaa ka dhacay kulan ay isku hor fariisteen madaxwaynayaasha Soomaaliya iyo Kenya.
Waxaa shirkaas goobjoog ka ahaa madaxweynaha Jabuuti, Ismaaciil Cumar Geelle iyo Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed
Gudoomiyaha degmada Howlwadaag oo C.I.D u diidan inuu ku wareejiyo askari dhaawac u geystay qof shacab ah.
WARBIXIN: Duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyo Soomaaliya.
Kulankii Rooble iyo Musharaxiinta oo natiijo la’aan ku soo dhammaaday
Muxuu ra’iisul wasaare Rooble caawa u sheegayaa musharixiinta mucaaradka?
Farmaajo oo la kulmay guddiga qaran ee xakameynta Covid19 iyo bulshada rayidka.